Labouchere Strategy - အေကာင္းဆံုး Roulette ကစားနည္း
Labouchere Strategy – အကောင်းဆုံး CSGO ကစားတဲ့နည်းဗျူဟာများအစီအစဉ်များ
အဆိုပါ Labouchere သုံးစွဲဖို့အလွန်ခဲယဉ်းသည့်စနစ်ဖြစ်ပြီး,, ဤသူသည်သင်တို့နှင့်အတူစတင်သင့်ကြောင်းမဟာဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး။ .
ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါကိုယ့်ကိုယ်ကို "လောင်းကစားလိုင်း" အောင်နှင့်နံပါတ်များကိုဘယ်လောက်သင်အလောင်းအစားသငျသညျပွောကွလိမျ့မညျနှင့်အရှည်သငျသညျအလောင်းအစားလိမ့်မယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဆုံးအဖြတ်တချို့လမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ . ဒါကြောင့်ဒီရိုးရှင်းတဲ့ Labouchere လောင်းကစားလိုင်း ( (ကလုံးဝကိုသင်မှတက်သင်ချင်ပါတယ်ဘာပဲ, သင်ချင်ပါတယ်ဘာပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်).
ဒါကတတ်နိုင်သမျှအနိမ့်ယင်းကစားနည်းစောင့်ရှောက်စေတဲ့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့. လောင်းကစားလိုင်းပါပဲ။. သင်သည်သင်၏လိုင်းရှိတစ်ချိန်ကဒါ။ , ယခုဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုမည်ဟုဒီတော့သင်ပထမဦးဆုံးလောင်း, သင်အနိုင်ရပါလျှင်, 2, သင်သည်သင်၏လိုင်းချွတ်လက်ဝဲနှင့် 2. လက်ျာလက်နံပါတ်များကို, သင်သည်သင်၏လိုင်းချွတ်လက်ဝဲနှင့်လက်ျာလက်နံပါတ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးဖြတ်ကူး, ဒါကြောင့်ယခုဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုမယ်လို့:
ဒါက Labouchere နှင့်အတူနှစ်ခုရွှေစည်းမျဉ်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: အမြဲတမ်းအနိုင်ရအပြီးသင့်ရဲ့လိုင်းချွတ်နှစ်ဦးစလုံးလက်ဝဲနှင့်လက်ျာလက်နံပါတ်များကိုဖြတ်ကူး. သငျသညျကိုချွတ်နံပါတ်များကိုကူးပါတယ်ပြီးတာနဲ့, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သစ်ကိုလက်ဝဲနှင့်လက်ျာလက်နံပါတ်များကိုယူ, အလောင်းအစားရန်သင့်အားလာမည့်အရေအတွက်အားပေးရအတူတူသူတို့ကို add. သင့်ရဲ့လိုင်း၌ကျန်ကြွင်းမျှဂဏန်းရှိပါတယ်သည်အထိသင်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်. ဒီနရောမှာသငျသညျဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ဝေးလမ်းလျှောက်ဖြစ်စေ, ပြောင်းလဲနိုင်သည်ရဲ့သတိရပါ) နဲ့တူသောအရာကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။.
သင်တစ်ဦးကစားပွဲကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အခါ, you don’t cross any numbers off your line. Instead you add the number that you’ve just bet to the right hand side of your line. ဒါကြောင့်နောက်တဖန်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အထက်လိုင်းသုံးပြီး, if you lose your first bet of 2, your line would then look like this:
James Bond (007) Strategy – အကောင်းဆုံး CSGO ကစားတဲ့နည်းဗျူဟာများအစီအစဉ်များ →
CSGOBET.CLICK » CSGO Gambling » Labouchere Strategy – အကောင်းဆုံး CSGO ကစားတဲ့နည်းဗျူဟာများအစီအစဉ်များ